बहुचर्चित ‘गोलमाल’को पाँचौं सिक्वेलमा आलिया भट्टको इन्ट्री ! – Khabar Silo
एजेन्सी, २७ माघ । बलिउडको बहु प्रतिक्षित कमेडी फ्र्यान्चाइज गोलमालको नयाँ भाग बन्ने भएको छ । निर्देशक रोहित शेट्टी र अभिनेता अजय देवगनको जोडीको सबभन्दा सफल श्रृंखला नयाँ फिल्म ‘गोलमाल ५’ २०२१ को दिपावलीमा आउने भएको छ ।
फिल्म समीक्षक राजीव मसन्दलाई उद्धृत गर्दै बलिउडसम्बन्धि समाचार पोर्टलहरुले जनाएअनुसार यसमा अजयको जोडीका रुपमा आलिया भट्ट देखिने संभावना छ । निकै ग’म्भीर चरित्रहरुमा देखिएकी आलियाले हल्काफूल्का कमेडीमा अभिनय गर्न खोजेको र यसका लागि गोलमालभन्दा राम्रो विकल्प अरु नभएको बताइएको छ ।
आलियाले हालै संजयलिला भन्सालीको ‘गंगुबाइ’, करण जौहरको ‘तख्त’ लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् । यस्तै, एसएस राजमौलीको फिल्म ‘आरआरआर’मा उनी अजय देवगनसँगै देखिदैछिन् । आलिया पनि जोडिएको खण्डमा गोलमाल श्रृंखला झन् ठूलो हुनेछ । यसअघिका गोलमालमा रिमी सेन, करिना कपुर र परिनीति चोपडा थिए, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
एजेन्सी । टाइगर श्राफ छोटो समयमै बलिउडमा र दर्शकमा आफनो स्थान बनाउन सफल अभिनेता मानिन्छन‍् ।टाइगरको अहिलेको ल्याभिस लाइफस्टाइल देखेर कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैनन् कि उनले पनि कहिले अभावमा समय काट्नु परेको थियो भनेर । तर उनी सानो हुँदा आर्थिक अभावका कारण उनले धेरै दुख सहेका थिए । यो कुरा टाइगर आफैंले बताएका हुन् […]
अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बन्दै ! फेसबुकमा तस्विर सार्वजनिक गर्दै लेखिन् यस्तो स्टाटस
आफू गर्भवती भएको गाइँगुइँलाई अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले सत्य सावित गरिदिएकी छिन् । ***यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न तल यहाँ क्लिक गर्नुहोस्*** परिवारसँग होली खेलेको तस्विरमा प्रियंका गर्भवती भएको अनुमान गरिएको थियो । उक्त तस्विरलाई आधार मान्दै उनी गर्भवती भएको गसिप पनि चलेका थिए । तर, प्रियंका स्वयमले सामाजिक संजालमार्फत आफू प्रेगेनेन्ट भएको पुष्टि गरेकी छिन् […]
प्रेम गीत ३ को ट्रेलर आउनु अगाडीनै ५० लाखमा बेचियो ।